Vsmart waxay soo bandhigi doontaa taleefannadeeda 20 -ka Maarso gudaha Spain | Androidsis
Dhowr wiig ka hor ayaa la xaqiijiyay in Vingrup, Kooxda tiknoolajiyada ugu weyn ee Vietnam waxaa lagu sameeyay aqlabiyadda BQ. Sidan oo kale, astaantu waxay joojisay inay ahaato Isbaanish, inay u gudubto gacanta kooxdan weyn, mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan suuqyada Koonfur-bari Aasiya. Shirkaddu waxay kaloo leedahay dhowr magac oo isku dallad ah, sida ay tahay Vsmart, mid ka mid ah kuwa ugu caansan suuqyadan.
Calaamaddan ayay hadda isku diyaarinayaan inay suuqa ka galaan Spain. Tan iyo markii la xaqiijiyay in march 20 waxaa jira dhacdo, kaas oo lagu soo bandhigi doono warka Vsmart, si sumadda loogu soo bandhigo suuqa qaranka qaabkan.
Waqtigan xaadirka ah ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan moodooyinka aan ku kulmi doonno dhacdadan. Xaqiiqdu waxay tahay in Vsmart ay tahay summad gebi ahaanba aan la aqoon loogu talagalay dadka isticmaala Yurub. Sidaa darteed, ma naqaanno waxa laga filayo xagga naqshadeynta ama qeexitaannada. In kasta oo ay u muuqato inay sii wadi doonaan inay adeegsadaan naqshad sida kuwa BQ ah.
Xaqiiqdii, qaar ka mid ah moodooyinka 'BQ' waa in laga bilaabaa Vietnam iyadoo la adeegsanayo magaca Vsmart. Marka waxaa la filayaa inay jirto nashqad isku mid ah oo arrintan la xiriirta. Gaar ahaan tan iyo markii ay ka faa'iideysan doonaan khadadka wax soo saarka ee BQ. Waxa aan la sheegin ayaa ah in calaamadda BQ ay sii jiri doonto Spain.
Tan iyo inkasta oo ay lumisay dhul badan sanadkii la soo dhaafay, waa summad si fiican u yaqaan dadka isticmaala. Way ku adkaan kartaa Vsmart inuu sidan ku soo galo suuqa. Laakiin adeegsiga magaca BQ wuxuu fududeyn karaa howsha. In kasta oo illaa iyo hadda aanan hayn xog ku saabsan arrintan.
Nasiib wanaag, toddobaad kadib shaki ayaan ka bixi doonnaa. Sababtoo ah 20-ka Maarso waxaa jira dhacdo la qorsheeyay. Dhexdeeda waxaad ku awoodi doontaa inaad ku ogaato dhammaan wararka uu Vsmart ku galayo suuqa Isbaanishka. Waa inaan eegno sida ay hal-abuurkani isu rogo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vsmart wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo galo Spain bishaan